6.1 Ny horohorontany tamin'ny alahady maraina nahafaty tany Iran dia nahatsapa hatrany Baghdad
Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » 6.1 Ny horohorontany tamin'ny alahady maraina nahafaty tany Iran dia nahatsapa hatrany Baghdad
Aogositra 26, 2018
Tazehabad, Iran no tanàna akaiky indrindra misy olona latsaky ny 1.100 izay nihovotrovotra tamin'ny horohoron-tany 6.1 mahery alahady maraina. Ilay horohoron-tany dia tsapa lavitra hatrany Baghdad, Irak, izay tsy nitatitra fahavoazana na fahavoazana.
Araka ny filazan'ny Iran Press, TV 2 no maty ary 58 no naratra hatreto. Mety hiakatra ity isa ity. Tsy dia mifandraika loatra amin'ny fizahan-tany iraisam-pirenena io faritra io.
Amin'ny ankapobeny, ny mponina ao amin'ity faritra ity dia mitoetra amin'ny rafitra mora tohin'ny horohoron-tany, na dia misy aza ny tranobe maharitra. Ny karazana tranobe mora tohina dia ny adobe block sy ny rafitra beton nonductile avo lenta miaraka amina fananganana infill.
Ny horohoron-tany farany teo tany amin'ity faritra ity dia niteraka loza mitatao toy ny fihotsahan'ny tany izay mety niteraka fatiantoka.
220 km NE atsinanan'i Baghdad, Irak / pop: 5,673,000 / ora eo an-toerana: 02: 48: 17.9 2018-08-26
77 km W of Kermānshāh, Iran, Islamic Republic of / pop: 622,000 / ora local: 04: 18: 17.9 2018-08-26
34 km SW of Javānrūd, Iran, Islamic Republic of / pop: 38,700 / ora eo an-toerana: 04: 18: 17.9 2018-08-26
Maty i John McCain: hahazo ny fanajana ve ny filoha Trump?
Fizahan-tany momba ny sarimihetsika: hijerena ny toerana misy ny sarimihetsika sangan'asa Tim Burton